Weligaa ma maqashay Spurine, maadaama mashruucan lagu baabtiisay magaca siyaasi iyo nin milatari oo ka tirsan Jamhuuriyadda Roman. Ama waxaa laga yaabaa inaad u timid qodobkaan adigoo raadinaya macluumaad dheeri ah maxaa yeelay waad horay u ogayd oo waxaad dooneysaa inaad bilowdo isticmaalkeeda.
Si kastaba ha noqotee, waxaan isku dayi doonaa inaan ku siiyo furayaasha ku saabsan waxa Espurino yahay iyo waxa ay kuu qaban karto adiga mashaariicdaada mustaqbalka, iyo sidoo kale talo soo jeedinno lagu baranayo sida ugu fudud ee barnaamij loogu sameeyo.
Muddo ka hor ayaan kuu sheegnay ku saabsan Anaconda, Mashruuc kale oo xiiso leh oo loogu talagalay dadka jecel Python ee raba jadwal looxyada arduino luuqad barnaamijkan oo noqotay mid caan ah. Wax la mid ah waxa ay qabato micropython, laakiin markan, Espurino, waxay kuu keenaysaa fursad kale oo cusub adoo adeegsanaya luqad kale ...
1 Waa maxay Espurino?
2 Taarikada rasmiga ah ee Espurino
Waa maxay Espurino?
Mashruuca Espurino waxaa abuuray Gordon Williams sanadkii 2012, isku day ah in loo oggolaado horumarinta microcontrollers on dhufto ee kala duwan. Markii hore may ahayn il furan, waxay si fudud u soo degsatay qalab adag oo bilaash ah oo loogu talagalay STM32 MCUs.
Sanadka 2013 mashruucu wuxuu qaadayaa talaabo aad muhiim u ah, noqoshada il furan ka dib olole dhaqaale oo aad loogu guuleystey oo ku saabsan barnaamijka 'Kickstarter crowdfunding platform'. Ololahani wuxuu ka gudbay jawigii hore ee horumarinta, isagoo raadinaya lacag si uu sidoo kale u soo saaro guddiyo taageeri kara barnaamijkan.
Qalabka Espurino wuxuu hadda shati ka haystaa Liisanka Dadweynaha ee Mozilla 2.0, halka lambarrada muunadku ay ka hooseeyaan MIT License, dukumiintiyada ka hooseeya Creative Commons Attribution-Attribution 3.0, iyo faylasha naqshadeynta qalabka ee hoosta ku qoran sidoo kale.
Tani waa sida Sumadda rasmiga ah ee Espurino, taas oo ay ku xigi doonto sii deyn badan oo noocyo kale ah sida ku dhacday mashaariic kale oo la mid ah sida Arduino. Intaa waxaa dheer, looxyadan waxay sidoo kale soo bandhigeen iswaafajin gaashaammada is-waafajinta Arduino, taas oo siinaysa xoogaa awood runtii xiiso u leh samaynta iyo DIYers.
Xilligan mashruucu wuxuu leeyahay xoogaa caan ah, oo leh muhiim bulshada horumarka iyo casharro badan iyo caawimaad aad ka heli karto internetka. Sidaa darteed, haddii aad jeceshahay JS iyo barnaamijyada microcontrollers, waligaa sidan uma fududaan ...
Koodhka isha mashruuca - GitHub
Websaydhka rasmiga ah - Spurine
Qalab - Soo dejiso (loogu talagalay taarikada kala duwan)
Un microcontroller, oo sidoo kale loo yaqaan 'MCU' (Micro Controller Unit), waa barnaamij la aqoonsan karo oo awood u leh inuu fuliyo amarrada qaarkood xusuusta. Tani waxay u dhigantaa qeexitaanka CPU sidoo kale, laakiin marka la eego MCU, badanaa way ka horumarsan yihiin oo xoog badan yihiin, bartilmaameedsanaanta shaqooyinka qaaska ah, sida aaladaha gundhigga ah
Marka lagu daro faraqa ka processor, microcontroller waa wareeg isku dhafan oo ay kujirto CPU laftiisa, marka lagu daro baloogyada kale ee shaqeynaya sida xusuusta iyo nidaamka I / O. Waxaan ula jeedaa, asal ahaan waa kombiyuutar dhameystiran oo hal jajab ah ...
Sidaa darteed, waxaad heli doontaa qalab rakhiis ah oo fudud taas waad barnaamijka kartaa sidaa darteed wax-soo-saarkooda iyo wax-soo-saarkooduba waxay kuula dhaqmayaan sida aad rabto oo markaa waxay ku abuuri karaan ficillo. Waxaad ka dhigi kartaa inay ka hesho macluumaad ka dareemayaasha dibadda ama kuwa wax qabanaya, kuna saleysan taas inay u diraan calaamado gaar ah iyada oo loo marayo wax soo saarkooda kuwa kale. Qaybaha elektarooniga ah ku xidhan
By habka, waayo kubilaabo Espurino IDE, uma baahnid inaad wax ku rakibto nidaamkaaga qalliinka, waa deegaan ku saleysan webka oo aad isticmaali karto ka soo bilow halkan biraawsarka aad jeceshahay
In kasta oo daalacashada shabakadaha kala duwan la isticmaali karo, si loo ifiyo qalabka kombuyuutarradan waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo Chrome iyo qalab loo yaqaan 'Espurino Web IDE' oo lagugula talinayo websaydhka rasmiga ah iyo inaad ka heli karto Chrome-kaaga xidhiidhkan.
Waxaan tixraacayaa ciyaaraha videog-ga kaa caawin doona inaad barato barnaamijka barnaamijyada luqadaha qaarkood, oo ay ku jirto JS. Ciyaarahaan, halkii aad ka isticmaali laheyd kumbuyuutarka ama jiirka si aad u hagto astaamaha ama aad ula macaamisho jawiga macmalka ah, waxaad yeelan doontaa waa tarjumaan luqaddan ah dhinac ka mid ah shaashadda iyo halka aad ka bilaabi doontid inaad gasho koodhka (laga bilaabo ugu fudud xitaa kan ugu horumarsan).
Sidan oo kale, waxaad ku xakameyn doontaa ciyaarta adoo adeegsanaya luqadda barnaamijka, markaa inta lagu jiro cayaarahaaga waad tegi doontaa barashada ku dhowaad iyada oo aan ogaanin oo kolba markii aad ku sii socoto hawlgallada aqoontaadu way kori doontaa.
Taarikada rasmiga ah ee Espurino
Ka dib horumarkii ugu horreeyay ee saxanka Asalka Espurino wuxuu yimid mashaariic badan oo la heli karo si loogu isticmaalo IDE iyo JS. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato iyaga, halkan waxaa ku yaal hordhac mid kasta:
Espurino (asal ahaan): waa saxankii asalka ahaa, kii ugu horeeyey ee loo qaabeeyey mashruucan. Sifooyinka ay leeyihiin waa:
STM32F103RCT6 32-waxyar 72Mhz ARM kiliyaha-M3 MCU
256Kb xasuusta flash, 28Kb oo RAM ah
microUSB, isku xira SD, iyo JST PHR-2 isku xira batariga banaanka
Laydh casaan, buluug iyo cagaar ah
Suufyada u oggolaanaya isku xirnaanta modulladaha Bluetooth HC-05
44 GPIO oo leh 26 PWM, 16 ADC, 3 UARTS, 2 SPI, 2 I2C iyo 2 DACs.
22 GPIO (9 gelinta analogga ah, 21 PWM, 2 taxane ah, 3 SPI iyo 3 I2C).
Xidhiidhiyaha USB-A ee saaran markabka.
2 LEDs iyo 1 badhanka PCB.
STM32F401CDU6 32-bit 84Mhz ARM kiliyaha-M4 MCU
Xusuusta: 384 Kb oo flash ah iyo 96Kb oo RAM ah
Wiilka Spurino: Waa guddi mataano ah ficil ahaan kii hore, kaliya in xoogaa horumar ah lagu daray. Tusaale ahaan, cabirkiisu waa 30x23mm, oo koraya si loo helo qol loogu talagalay ESP8266 WiFi chip. Intaa waxaa dheer, USB waxaa loo beddelay microUSB, tirada GPIO-yada waxaa loo dhimay 21 (8 analog, 20 PWM, 1 taxane, 3 SPI iyo 3 I2C). Dhinaca kale, microcontroller-ka sidoo kale waa la xoojiyay, hadda waa STM32F411CEU6 32-bit 100Mhz ARM Cortex-M4 oo wata 512kb oo xusuusta flash-ka ah iyo 128 kb oo RAM ah.
Spurino Puck.js: Asal ahaan waa badhan caqli badan oo Bluetooth ah oo aad ku mahadin karto barnaamijkiisa mahadnaqkiisa gudaha ee microcontroller iyo turjubaanka (horay loo sii rakibay) ee leh JS. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay 52832Mhz ARM Cortex-M4 nRF64 SoC oo leh 64kB oo RAM ah iyo 512Kb oo flash ah, GPIO, NFC tag, MAG3110 magnetometer, gudbiye IR, heerkulbeeg la dhisay, iyo sidoo kale dareemayaal heer iftiin iyo heer batteri ah.
Spurino Pixl.js: Waa qalab la mid ah kii hore, laakiin bedelkiisa badhanka waa shaashad casri ah oo loo yaqaan 'Bluetooth LE smart'. Shaashadeeda waxay leedahay cabbirro ah 128 × 64 monochrome, halka astaamaha intiisa kale ay la mid yihiin Puck.js.
MDBT42Q: waa isla moduleka Pixl.js iyo Puck.js, laakiin anteenada dhoobada leh. Inta kale ee astaamaha farsamo waxay la jaan qaadayaan labadii hore, laakiin aan lahayn shaashad ama badhan kiiskan ...
Hadaad ubaahantahay xoogaa iibso taarikadaan Espurino waxaad ka heli kartaa gudaha dukaan websaydh rasmi ah Laga soo bilaabo mashruucan. Waxa kale oo aad ka heli kartaa iyada oo taxane ah qaybiyeyaasha saraakiisha loo xilsaaray mashruuca, sida qaar ka mid ah raashinka caanka ah sida Adafruit, iwm.
openELEC: wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato xaruuntaan badan ee warbaahinta